Nandroaka Mpiasam-Panjakana Miisa 10 000 Noho ny Fanamboamboarana Diplaoma ny Filohan’i Tanzania · Global Voices teny Malagasy
Tokotokony ho eo amin'ny 2 isanjaton'ny Mpiasa nohadihadiana izany.
Voadika ny 06 Mey 2017 9:54 GMT
Vakio amin'ny teny 日本語, Swahili, Español, English
Tamin'ny 28 Aprily, nomen'ny Filoha John Magufuli ny baiko androahana eo noho eo ny mpiasam-panjakana miisa iray alina eo ho eo rehefa hita tamin'ny fanadihadiana fa mitazona toerana noho ny fanamboamboarana mari-pahaizana tsy nananany akory ny sasantsasany amin'ireo mpiasan'ny governemanta ireo.
“Mpangalatra tahaka ny mpangalatra hafa ihany koa izy ireo,” araka ny notsongaina ho nolazain'i Magufuli. “Mety ho nigadra fito taona araka ny nolazain'ny lalàna izy ireo.”
Tonga izao fanadiovana izao herintaona taorian'ny nahitan'ny governemanta fa manary shillings amina miliara isan-taona amin'ny “mpiasa matoatoa” amin'analiny izy.
Hita ao amin'ny tatitra, izay nanamarina ny fahamarinan'ny mari-pahaizana eo amin'ny mpiasan'ny governemanta miisa 450.000, fa ny any amin'ny kaominina no mitari-dalana amin'ny isan'ny mpiasam-panjakana nanamboatra diplaoma amin'ny isa 8 716. Arahin'ny sampan-draharaham-panjakana tahaka ny Oniversiten'ny Fambolena ao Sokoine nahatrarana olona manana mari-pahaizana faikany miisa 33 sy mpiasan'ny Fiaraha-miasan'ny Lalambin'i Tanzania nahatrarana olona manana mari-pahaizana faikany miisa 24 izany.
Amin'ny ankapobeny dia nahazo “poa sana” (tena tsara), “safi sana” (tena mahafinaritra) maro ny vaovao satria finaritra amin'ny fandraisana andraikitra amin'ity karazn'olona ity ny olona. Eny fa na dia ny filoha teo aloha Benjamin Mkapa aza dia niseho ampahibemaso nanohana ny hetsika nataon'i Magufuli, nilaza fa “tara” ny fanapahan-kevitra.
Mandritra izany fotoana izany, nisioka ny antoko iray ao amin'ny fanoherana, Alliance for Change and Transparency (ACT na Fiarahan-Dia ho amin'ny Fiovana sy ny Mangarahara), fa na dia manohana ny fitarihan'ny governemanta iadiana amin'ny mari-pahaizana hosoka aza ry zareo, dia nanontany ry zareo fandrao lasa lavitra loatra ny fampiharana.
“Tokony any amin'ny fitsinjovana mialoha no anaovana ny ady amin'ny mari-pahaizana faikany. Tokony hisy ny rafitra apetraka hiantohana fa tsy tokony hisy olona ampiasaina rehefa nanamboamboatra mari-pahaizana ry zareo,” hoy i Kijo-Bisimba tamin'ny The Citizen, gazety iray ao an-toerana mivoaka amin'ny teny anglisy.
Eo amin'ny sehatra iraisampirenena, misy ireo olona midera ny nataon'i Magufuli ary mampitaha ny olan'ny mari-pahaizana faikany amin'ny an'ny firenen-kafa. Misy fanehoan-kevitra mivoaka ao amin'ny pejy Facebook an'i BBC Africa no mitehaka amin'ny hetsika nataon'ny filoha Tanzaniana. “Nanao ny asa tokony natao indrindra ny filoha,” hoy i Chimwemwe Tembo, izay milaza amin'ny momba azy ho avy ao Malawi :
Mientanentana ao anatin'ny fiderana ihany koa i Gezahegn Arebo, avy ao Ethiopia: